लगानीकर्तालाई रिचार्ड बान्डका ५ सरल सुझाव, यसरी लिन सकिन्छ शेयरमा राम्राे नाफा निगरानी -
बजारमा चलायमान रहँदा धेरै तहबाट फाइदा हासिल गर्न सकिन्छ । लगानीको निर्णयको बाबजुद, त्यहाँ कति लगानी गर्न, लगानी कसरी गर्ने भन्ने राम्रो बिन्दु तपाईँले कसरी पाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो।
धेरै युवा लगानीकर्ताहरूले सम्भावित कम्पनीको '४०१ के' योजनाका लागि रोजगारी गर्नेछन्, ब्रोकरेज खाता खोल्ने अर्को विकल्प हो । तपाईँ जुनसुकै व्यवसाय गर्नुहाेस्, यदि तपाईं त्यो व्यापारको सही मार्ग तपाईँजान्नुहुन्छ भने त्यो नै सफलताको संकेत हो ।
बजारमा कारोबार गर्दा विचार गर्नुपर्ने केही यस्ता सुत्रहरु जान्नुहोस् जसले तपाईँलाई शेयर बजारमा सफल बनाउँछ र तपाईँले यहाँबाट धेरै कमाउन सक्नुहुन्छ ।
उक्त समयमा बजारमा नगद प्रवाह कम हुन्छ । तलब तथा पेन्सनहरु लगभग खर्च भइसकेका हुन्छन्, नयाँ तलब र पेन्सन आउने बेला भएको हुँदैन । यस्तो अबस्थामा बजारमा तरलता कम हुन्छ, आफ्नो खर्च पूरा गर्नका लमागि कतिले शेयर बेच्छन् भने बजारमा तरलता कम हुनाले लगानी कम भएको हुन्छ ।
प्रतिशेयर एक सय भन्दा कम र प्रतिशेयर एक हजार भन्दा बढी मूल्य भएका शेयरहरु किन्दा अलि विश्वासिलो ब्रोकरबाट मात्र किन्न सल्लाह दिइन्छ । यसका दुइवटा कारणहरू छन् ।
१. एक हजार भन्दा कम मुल्य भएका स्टकहरूमा प्राय: आस्क र विड प्राइसको बीचमा ठूलो अन्तर हुनसक्छ, यस्तो अवस्थामा शेयर खरिद गर्न तपाईले ठूलो मूल्य बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसमा ब्रोकरको विश्वास भएन भने तपाईं फस्न सक्नुहुन्छ ।
२‍‍. एक सय भन्दा कम मूल्यका शेयरहरु प्राय समस्यामा रहेका कम्पनीहरुको मात्र हुन्छ । यस्तो कम्पनीको शेयर किनेर जोखिम उठाउन कि त तपाईंको आफ्नो दिमाग चाहिन्छ कि त विश्वासिलो ब्रोकरको सहयोग चाहिन्छ ।